YAA MOOTOTA AFRIIKAA -Filannoon waggaa 30 yookaan 40 ol fudhachuu danda’a jedhe! – Beekan Guluma Erena
YAA MOOTOTA AFRIIKAA -Filannoon waggaa 30 yookaan 40 ol fudhachuu danda’a jedhe!	Beekan Guluma Erena
Audio/Video/Image Category, Politics Category April 29, 2016OROMO
Dura bu’aan biyya Eritiriyaa kun filannoon biyyakootti geggeeffamuuf waggaa 30 yookaan 40 ol fudhachuu danda’a jedhe. Baruma yoom biyya Afriikaa keessatti Filannoon dimookiraatawaaa ta’uu danda’a laata? Garuummoo kan Itoophiyaa isa filannoon jira jedhee sobee korojoo hatuufi mana hidhaatti mormitoota guururra isa akka kanaan seenaa filannoo guutummaatti cufu hin wayyuu? …Yaa uumaa mee Ardii Afriikaatti fuulakee nuuf galagalchi!! Mee afaansaarraa dhaggeeffadhaamee….
← I L K A A N M O R O D D E E !!
NAGAAN GALI JEDHAA !Roobeeraa Hinsarmuutiin →